प्रचण्डले पशुअधिकारकर्मीलाई भने– हात्तीलाई दुःख दिएको देख्ने, राम्रा गुण नदेख्ने ? | Safal Khabar
प्रचण्डले पशुअधिकारकर्मीलाई भने– हात्तीलाई दुःख दिएको देख्ने, राम्रा गुण नदेख्ने ?
विहीबार, १० पुस २०७६, १७ : ४६
चितवन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन हात्ती महोत्सव सिंगो नेपालकै चिनारी रहेको बताउनुभयो । आज हात्ती महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले हात्ती महोत्सवले चितवनसँगै नेपाललाई नै विश्वमा चिनाउन सफल रहेको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याइरहेको हात्ती महोत्सवलाई धराशायी बनाउने खेल भइरहेकाले सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । केही पशु अधिकारकर्मीहरुले हात्तीलाई दुःख दिएको लगायतका विषयमात्रै देखाएर सयौँ गुणा राम्रा र फाइदाका कुरालाई ओझेल पार्न खोजेको प्रचण्डको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष आयोजना हुने हात्ती महोत्सवले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग मिलेको उहाँको भनाइ थियो । पर्यटकीय उद्योग विकासका लागि सम्भावनायुक्त देश नेपाललाई विश्वमा चिनाउन थप सवै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिनुभयो ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री एवंम सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले पशुअधिकारको नाममा मुलुकलाई नै बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अन्य विभिन्न देशमा वन्यजन्तुसम्बन्धी खेल खेलिँदा केही नहुने नेपालमा हात्ती महोत्सवमा खेलिने खेललाई लिएर अनेक टिप्पणी आउनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न व्यवसायीदेखि सबैले आप्mनै विशेष क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सांसद कृष्णभक्त पोख्रेल, प्रदेश सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
#प्रचण्ड #हात्ती महोत्सव